EU Monitoring Mission calls on MOIC Union Minister after its 3rd meeting with Myanmar Government Ministries – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
EU Monitoring Mission calls on MOIC Union Minister after its 3rd meeting with Myanmar Government Ministries
THE Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin received the delegation of Enhanced EBA monitoring mission of the European Union at 10 am on 22 February 2019 at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw and discussed on the Government’s efforts on the promotion and protection of human rights, labour rights as well as matters relating to Rakhine State.
During the visit of the EU delegation to Myanmar, the 3rd meeting between Myanmar Government departmental officials and the Enhanced EBA monitoring mission of the European Union was held at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw on 21-22 February 2019.The meeting was co-chaired by U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and Mrs. Helena Konig, Deputy Director General of European Commission Directorate General for Trade.
At the meeting, both sides discussed on the matters relating to the cooperation with the United Nations, humanitarian assistance to the affected areas in Rakhine, Kachin and Shan States, improving conditions for IDPs, creating conducive condition for voluntary, safe and dignified return of displaced persons, combating hate speech, media freedom and labour rights reform and implementing the recommendations of Advisory Commission on Rakhine State as well as the issue of accountability.
The meeting was attended by representatives from various line Ministries and Union Attorney General’s Office from Myanmar side and Mrs. Paola Pampaloni, Deputy Managing Director/ Director Asia-Pacific of the European External Action Service, Mr. Kristian Schmidt, Ambassador of the European Union to Myanmar and members of the Enhanced EBA monitoring mission from the EU side.
The EU delegation also visited Rakhine State from 18 to 19 February 2019 and called on the Chief Minister of Rakhine State as well as the Speaker of the Rakhine State Hluttaw, separately. During the trip, they visited the Government Technical High School and also met with Rakhine community in Min Gan, Muslim community in Kyein Ni Pyin IDP camp and Hindu community in Hindu temple in Sittwe.
မြန်မာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲအပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဥရောပသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေး စိစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ဥရောပသမဂ္ဂဘက်မှ ကုန်သွယ်မှုညွှန်ကြားမှုဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mrs. Helena Konig ဦးဆောင်သော ဥရောပသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေး စိစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ ၁၀၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး မြှင့်တင် ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ကိစ္စရပ်များအပေါ် အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်မှု များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေး စိစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့တို့အကြား တတိယအကြိမ်မြောက် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ နှင့် ၂၂ ရက်များတွင် နေပြည်တော်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ရာ၊ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူက ဦးဆောင်၍ လည်းကောင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂဘက်မှ ကုန်သွယ်မှု ညွှန်ကြားမှုဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mrs. Helena Konig က ဦးဆောင်၍ လည်းကောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ယခု ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်များတွင် လူသားချင်း စာနာမှုအထောက်အပံ့များ ပေးအပ်နိုင်ရေး၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ၏ လူနေမှုအခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၊ တစ်ဖက် နိုင်ငံရောက် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒဖြင့် လုံခြုံကောင်းမွန်စွာ ပြန်လာနိုင်ရန် အခြေအနေကောင်းများ ဖန်တီးပေးရေး၊ အမုန်းစကား တားဆီးရေး၊ သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ကာကွယ် မြှင့်တင်ရေး စသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင် နေသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ရှိစေရေး ကိစ္စများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာဘက်မှ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဥရောပသမဂ္ဂဘက်မှ ပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာန၊ ဒုတိယဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Mrs. Paola Pampaloni ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး Mr. Kristian Schmidt နှင့် ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေး စိစစ်လေ့လာရေး အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေး စိစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈-၁၉ ရက်များတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့သို့ သွားရောက်၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့အား သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ်တွေ မြို့နယ်ရှိ နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ မင်းဂံရှိ ရခိုင်အသိုက်အဝန်း၊ ကြိမ်နီပြင် IDP စခန်းရှိ မွတ်စလင် အသိုက်အဝန်းနှင့် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းရှိ ဟိန္ဒူ အသိုက်အဝန်း တို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။